Fedora 25 inosvika munaNovember neWayland server nekutadza | Linux Vakapindwa muropa
Fedora 25 inosvika munaNovember neWayland server nekutadza
Tichangobva kudzidza kuburikidza nezvinyorwa zve Fedora 25 kupfuura inotevera vhezheni yeFedora ichaunza iyo graphical server Wayland nekukasira, uchive iko kwekutanga kupihwa kwekushandisa iyi graphical server mune yakagadzikana vhezheni.
Iye zvino zvese kugoverwa kweGnu / Linux zvinoshandisa X.org se graphical server, chimwe chinhu chinozochinja nechizvarwa chitsva chemaseva emifananidzo, asi ivo vanononoka kuuya. Saka Ubuntu iri kugadzirira yayo sevha inonzi Mir, sevha isinganyanyo kufarirwa. Nekudaro, Wayland igrafiki sevha iyo akawanda madhesiki uye kugoverwa kuri kushanda navo asi kwete mushanduro dzakatsiga kana nekutadza mukati mavo izvozvi.
Iyo inotevera vhezheni yeFedora ichavhurwa inotevera Mbudzi 15, kana pasina kunonoka. Iyi vhezheni inounza Wayland nekukanganisa, chimwe chinhu chavakatoda kupa muFedora 24 asi izvo nekuda kwezvikonzero zvekarenda vaifanira kuramba nekuzvipa seimwe nzira muzvitoro. Fedora 25 ichaunza nekukanganisa kunyangwe ichizoshandisa Xorg muzvirongwa nemabasa uko Wayland isina rutsigiro kana mashandiro sezvazviri zvino kune vatyairi veNvidia.
Fedora 25's Wayland inoshandisa zvikamu zveXorg kana isingashande
Saka tinogona kutaura kuti mushandisi wekupedzisira haazove neWayland yakachena pamushini wake, kunyangwe iye asingafanire kuona musiyano uripo pakati peFedora 25 naFedora 23, zvirinani muchimiro, sezvo Wayland ichipa chengetedzo huru mukushanda kweseva uye kwete nekukurumidza. Mune mamwe mazwi, vashandisi vekupedzisira vanongoona chete chengetedzo hombe mukushandisa mashandisiro, asi hapana chitsva icho Xorg isingapi.
Idzi inhau dzakanaka dzevamiriri veWayland, nekuti pakupedzisira iyi graphical server yakapfuura Mir, mhinduro yakatsanangurwa neCanonical, zvirinani maererano nekusvika kumushandisi wekupedzisira. Zvino zvichave zvakafanira kuti uone kana iri chaizvo iyo Xorg yakagadzikana inofanirwa kuchinjira kunze Wayland kana Mir Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Fedora 25 inosvika munaNovember neWayland server nekutadza
Pakupedzisira, izvo zvaifanira kuitika zvakaitika. Wayland yakabuda pamberi paMir, uye nerutsigiro rwakawanda kupfuura urwu.
Ini ndinofunga kuti parizvino hazvizove zvakakosha, kana iko kuita kwakaenzana kana kutonyanya uye pamusoro payo kuri greener ini handidi kuiisa mumuchina wekugadzira kana kupenga. Pamwe mugore kana maviri ...
Ndanga ndichiverenga iyi nhau kubvira fedora makumi maviri xddd Inoti uye uye nvidia vatova nevanotyairi vemba neWayland?
Adrian Ricardo Scalia akadaro
kupenga kuisa green server papc, chero zvazvingava, fungidzira. Ini ndinofunga ndiko kuchave kupera kwewland, ndizvo zvakaitika nekubatana payakaburitswa kare.
Pindura Adrián Ricardo Scalia
Kunyangwe ichikosha kana kwete hapana mubvunzo, EHE, zviripo, X11 ine zvakawanda zvekukanganisa.
Uye zvakare, pamwe neiyo HiDPI yekupinda, ndinoreva, 4K skrini dzinove dzakanyatsodikanwa, nekuti kana iwe uine mbiri yekutarisa, imwe iine 4K uye imwe yacho yakajairika, hazvigoneke kuita akasiyana masikero pane yega yega yekutarisa, neWayland zvisinei izvi zvaisazodaro. kuva muganho.
Fedora ndiyo distro yandakaisa kwemwedzi mishoma, uye ndinofanira kutaura kuti ndinoifarira zvakanyanya, nekuti havasi ivo vepamberi chete, asi zvakare yakagadzikana zvisingaverengeke kupfuura kumwe kugovera kune zvakawanda zvakapfuura nguva mapakeji (semuenzaniso kuyedzwa kweDebian).
Kune zvese izvo, ini ndinofunga kuti kana Fedora ikazvizivisa, imhaka yekuti ivo vakawana chokwadi kudzikama uye kuita kwavanoita, Fedora haambokundikani, uye panguva ino hazvizove izvo.
Zvinoita sekunge zvakaoma kutenda kuti Fedora yakagadzikana kunyangwe kupfuura kuyedzwa kweDebian. Fedora angaite senge Red Hat yekuyedza vhezheni ...
Hongu, asi izvo hazviise kusahadzika kuti vane hanya nezvechigadzirwa chekupedzisira.
Iniwo ndinobvuma kuti fedora yakatsiga,
semuenzaniso ndakaedza kuwanda Kaos, antergos, manjaro uye ese igungwa rekusagadzikana, tsikidzi uye kupunzika fedora «korora 24» yakanyatsogadzikana kupfuura chero zvataurwa uye vanounza software ichangoburwa ingangoita se kutenderera distro uye zvakawanda zvechizvino-zvino kupfuura kuvhura kana chero chinhu chinobva kudebian mune yangu chinoshanda chaizvo chaizvo uye ndinofunga kuti kune mushandisi akajairika ndiyo sarudzo chaiyo, kana iri distros yakatorwa kubva archlinux ndinofunga kuti zvese zvavanoita gadzira yemahara software inoita seisina musoro neboka rayo rembug uye kupunzika kwakakodzera chete kuzviuraya fakir uye kwete kumunhu anoda kuyedza chimwe chinhu kunze kwemahwindo uye ndicho chikonzero chaicho nei ndisingade zvinobva ku archlinux zvishoma asi ini ndinotya kwazvo kuti nhasi vazhinji vanoda kuziva vanoguma vanyura mugungwa rekusagadzikana, zviputi uye tsaona.
Linux inotendeuka 25